umbuzo Ayikwazi ukususa!
iinyanga 8 4 iintsuku ezidlulileyo #1245 by SkipperLP
Ngoko kwi-P3D v3 ndifake ii-airplanes kunye nemibala.
Imibukiso isebenza ngokugqibeleleyo kodwa zonke iindiza engifakileyo ngoku zingasebenzi kakuhle.
I-legit ayikwazi ukususa ... okanye xa ndihamba, iikhilomitha kuphela emva komgwaqo.
Ndamazama ukubeka ububele bam kwi-max kunye "nento encinane ye-Zero" (Sry ayiqinisekisi ukuba yintoni ibizwayo) ukuya kumaminithi. kwaye max ... Akukho nto yatshintshile.
Emoyeni ukulawulwa kusebenza umelwane (okanye kunzima kakhulu).
Ngaphandle komhlaba abagijimi basebenza ngokugqibeleleyo.
Ngeenkampani zangaphambili ezifakwe kwi-Prepar3d yonke into isebenza kakuhle.
Naliphi na indea?
iinyanga 8 3 iintsuku ezidlulileyo #1247 by SkipperLP
NGAPHAMBILI: Kufumene ukuba umdlalo wam uvuyo ulungelelanisekanga kakhulu kulezi zizaphulo. Hlela "Indawo yokuHlala" kwi-1 kwaye ibe ngcono.
INJONGO YAMI ayifinyeleli ekupheleni kwe-axis epheleleyo nakwi-Null Zone 1.
I-Keyboard yam yonke into isebenza.
iinyanga 7 6 iintsuku ezidlulileyo #1288 by gesi
Lungisa ubungakanani obuninzi beenqwelo-moya ukuba zingenanto. ngoko uzama ukukhupha nge-flaps encinane.
Ukuba uvela emhlabathini, ingxaki yayisisindo.
iinyanga 6 4 kwiiveki ezidlulileyo #1295 by JackRiordan
1) Kwi-Windows 10 yokukhangela ibha, thayipha kumlawuli. Cofa kwikhetho lokusetha abalawuli beMidlalo ye-USB. Unokufumana olu khetho kwi-Windows Control Panel yakho phantsi kweeMpahla kunye neMenyu ye-Printers.
2) Ukuba umlawuli okanye umxube wolwazi uluhlu, nqakraza, uze uqakraze iipropati. Kwiipropati, nqakraza isethingi sethebhu. Cofa iqhosha lokulinganisa. Landela imiyalelo ukulungelelanisa idivayisi yakho.
3) Vula i-flight simulator yakho. Yiya kwimenyu yakho yokukhetha. Yiya kwii-Axis Assignments zakho. Nika i-X Axis kwi-Aileron Axis. Nika i-Y Axis kwi-Axis ye-Elevator. Qinisekisa ukukhangela ibhokisi ukuyibuyisela, ngaloo ndlela ukutsala emva kwintonga kuphakamisa i-pitch (ekhaleni) yendiza. Nika i-rudders yakho nayiphi na enye iifowuni okanye idivaysi ofuna ukuyisebenzisa kwi-rudders.
4) Yiya kwimenyu yokulinganisela. Qinisekisa ukuba imodamo ye-flight isetyenziswe kwiNqununu. Ukuzibuyisela kwakhona kwi-default. Emva kokuzama ukundiza indiza, hlengisa ezi zixabiso njengoko zifunekayo.
5) Njengoko iGazethi ibhekisiwe, Yiya kwimenyu yakho yefowuni kunye nokuhlawula umvuzo kwaye qinisekisa ukuba awuthwali umbane okanye imithwalo eninzi.
6) Ngaphambi kokuba kuthathwe, kulungile ukulandela uluhlu lokutshekisha kwinqwelo. Ukuba awunayo enye ye-Google eyodwa, kwaye uyilandele.
7) Ukuba ulawula ukuthabatha, kodwa ufumanise ngokukhawuleza kwi-stick ukuze ugcine impumlo, kufuneka ubeke izitshixo ze-elevator (down) kunye ne-elevator trim (up). Qinisekisa ukuba uphinda ngokuphindaphindiweyo ukuze ukwazi ukubamba phantsi iqhosha lokunciphisa.
iinyanga 3 3 iintsuku ezidlulileyo #1377 by Luciad10
I-SkipperLP yabhala: NGAPHAMBILI: Kufumene ukuba umdlalo wam uvuyo upheleleke kakhulu kulezi zizaphulo TNS . Misela "Indawo yokuHlala" kwi-1 kwaye ibe ngcono.
Kodwa unako ukukhetha umxube wokuzonwabisa xa u-joystick engafanelekanga kwiindlela ezahlukeneyo ozenzayo.
Ixesha ukwenza page: 0.299 imizuzwana